Voatsikera Ho Toy ny “Mifanohitra Amin’ny Zon’Olombelona ” ny Fanilihana Kandidà Amin’ny Fifidianana Solombavambahoaka ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voatsikera Ho Toy ny “Mifanohitra Amin'ny Zon'Olombelona ” ny Fanilihana Kandidà Amin'ny Fifidianana Solombavambahoaka ao Hong Kong
Voadika ny 23 Febroary 2018 8:17 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, English
Agnes Chow. Sary: Demosisto.
Ity lahatsoratra ity dia fanangonana ireo ampahana tatitra avy amin'ny Hong Kong Free Press izay nataon’i Kris Cheng, Karen Cheung ary Jason Ng. Navoaka tamin’ny Global Voices izy io noho ny fifanarahana ny fifampizaràna votoaty
Ny 26 Janoary, nosakanan'ny governemantan'i Hong Kong ny mpikatroka miandany amin'ny demokrasia Agnes Chow tsy hihazakazaka haka seza amin'ny fifidianana amin'ny ampahany ny Filankevitry ny solombavambahoaka ho avy eo, noho ny fifandraisany ara-politika amin'ny Demosisto, vondrona iray manohana ny fahaleovantenan'i Hong Kong izay fari-piadidiana manokana ao Shina.
Ny fifidianana amin'ny ampahany, izay nalamina ho amin'ny volana Martsa 2018, dia mikendry ny hameno ireo seza efatra banga, taorian'ny nandavana ireo enina mpanao lalàna mpanohana demaokrasia, tamin'ny volana Jolay 2017, noho ny nanovàna ny fianianana fankatoavana an'i Shina nandritra ny lanonana nanokanana azy ireo. Mbola eny amin'ny fitsaràna ny roa amin'ireo fampakarana didy
Mba hahazoana indray ny fiverenan”ireo seza, ny ankolafy politika mpandàla demokrasia (fantatra amin'ny anarana hoe Pan-Democrats) dia nanao fifidianana savaranonando hisafidianana ireo kandidà ao amin'ireo distika amin'ny faritra andrefan'i Kowloon sy ireo Faritany Vaovao ao Atsinanana. Ho an'ilay Nosy Distrika, tamin'ny alàlan'ny fandrindrana anatiny, Agnes Chow no voafidy ho mpilatsaka ho fidiana amin'ny savaranonando, miaraka amin'ny Au Nok-Hin ho safidy faharoa.
Na izany aza, dia tsy nosakanan'ny manampahefana iray misahana fifidianana tsy handray anjara tamin'ilay fifidianana ampahany i Chow rehefa avy nifampidinika tamin'ny Sekreteram-pitsaràna.
Tao anaty fanambarana iray navoaka tamin'ny 27 Janoary, nohazavain'ny governemanta ao Hong Kong ny antony niheveran'izy ireo ny maha-olana ny fiarahany amin'i Demosisto
‘Ny fanambaràna fizakantena na ny fanovàna ny rafitra HKSAR [Fari-Piadidiana Manokana ao Hong Kong ]amin'ny alalan'ny fitsapankevitra, izay ahitana ny safidin'ny fahaleovantena, dia tsy mifanaraka amin'ny sata mifehy ny lalàm-panorenana sy ny satan'i HKSAR araka ny voalazan'ny Lalàna Fototra [araka ny iantsoana ny lalam-panorenena kely ao Hong Kong] , ary koa ireo politika fototra an'ny Repoblikan'i Shina momba an'i Hong Kong […]
Tsy afaka manaraka tanteraka ny fepetra mifanaraka amin'izay voalazan'ny lalàm-pifidianana ilay kandidà, satria ny fisoloana vava na fanandratana ny fanambaràna fizakantena dia mifanohitra amin'ny votoatin'ny fanambarana izay takian'ny lalàna ho ataon'ny kandidà iray mba hampiharana ny Lalàna Fototra sy ny hilazàna fankatoavana ny HKSAR.
Marina tokoa fa i Joshua Wong, mpitarika to-teny ao amin'ny Demosisto, dia efa nanamafy indray mandeha fa “ny fahaleovantena dia tokony ho iray amin'ireo safidy amin'ny fitsapakevitra momba ny fanambaràna fizakantena”. Na izany aza, i Chow izy tenany koa nanamarika tamin'ny fotoam-pivoriana fa samihafa ny manohana ny fanambaràna fizakantena sy ny manohana ny fahaleovantena tsy misy fangarony. Nanazava indray ny toerany izy nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny gazety Hong Kong Free Press tamin'ny 25 Janoary:
Misolo vava ny fanambaràna fizakantena ny Demosisto izay mahakasika ny fahalalahana sivily, fifidianana andraisan'ny rehetra anjara sy ny fahafahana manao safidy amin'ny fiainana ary tsy hanaraka ny fitsipika napetrak'ireo orinasa goavana miasa miaraka amin'ny governemanta. Samihafa tanteraka amin'ny fiarovana ny fahaleovantena izany.
Tsy vao voalohany ireo mpiandraikitra ny fifidianana no tsy nanaiky filatsahana iray. Na izany aza, raha ny mateti-pitranga, nomena vintana ho afaka manazava ny politikany ireo kandidà. Tamin'ny taona 2016, nosakanan‘ny mpiandraikitra ny fififdianana iray tsy hilatsaka amin'ny fifidianana solombavambahoaka i Edward Leung, noho ny fanambarana ampahibemaso sy tao amin'ny Facebook ny fanohanany ny fahaleovantenan'i Hong Kong amin'i Shina.
Raha ny momba an'i Chow, tsy nanondro fanambarana ampahibemaso na fihetsika izay nandika ny Lalàna Fototra ilay mpiandraikitra ny fifidianana, fa niteny fotsiny hoe ilay fanapahan-kevitra dia nampahafantarina azy tamin'ny alàlan'ny fandikàna navoaka avy any Beijing, tamin'ny volana Novambra 2016 momba ny andininy faha-104 amin'ny Lalàna Fototra ao Hong Kong, izay mamaritra ny fianianana, .
Ao anatin'io fandikàna io, notsindrian'i Beijing fa ireo tompon'andraiki-panjakana dia tsy maintsy fanambaràna tsy fivadihana amin'ny Repoblika Entim-bahoaka ao Shina sy “ny fari-piadidiany Manokana ao Hong Kong”, ary ireo izay tsy manao toa izany, mandiso izany, na mandikà ny fianianana dia ho tomponandraikitra manoloana ny lalàna.
Satria tsy naneho ampahibemaso ny fihetsempony manokana amin'ny fandalàna ny fahaleovantena i Chow, niorina fotsiny tamin'ny fiaraha-miasany ara-politika amin'ny Demosito ny fanapahan-kevitra hanilika azy tamin'ny fifidianana, “izay nanàla mazava ho azy ny zon'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mba hilatsaka”, izay no nolazain‘i Demosito tamin'ny 27 Febroary
Toy ny fanalàna maharitra ny zo politikan'ireo mponina ao Hong Kong ny fanafoanan'ny governemanta ny zo hilatsaka ho fidiana. Tsindrian'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona fa tsy tokony ho fototry ny fandraisana anjaran'ny olona iray amin'ny dingana demaokratika ny fiandaniana ara-politika ananany. Noho izany, tsy manaraka ny lalam-panorenana ary tsy manaja ny zon'olombelona ilay fanapahankevitra.
An'arivony no nitokona teo ivelan'ny Filankevitry ny solombavambahoaka tamin'ny 28 Janoary, nanohitra ny fanapahankevitry ny governemanta. Nilaza i Joshua Wong nandritra ilay famoriambahoaka fa na nosakanana tamin'ny fifidianana solombavambahoaka aza ny Demosisto, dia hanohy izy ireo:
Voasakana ny làlan'ny fifidianana, hanokatra làlana hafa isika ary hahita fivoahana ho an'ny hetsiky ny Demokrasia ao Hong Kong
Chow nanindry hoe:
Milatsaka ho fidiana ireo tanora, tsy hoe mba ho lasa mpanao lalàna, fa mba hanome lanja ireo finoantsika ara-politika hijoro ho an'ny rariny sy Hong Kong tsaratsra kokoa. Làlana sarotra izany […] Maro ireo olona mpamitaka sy tsy maha te-ho tia ao ivelany ao [manakana ny làlantsika], mila hentitra sy matanjaka isika. Tsy ho resin'ny governemanta tsy mendrika sy mahatsiravina isika.
Nitsikera ny fanapahankevitry ny governemanta ihany koa ny sehatry ny lalàna. Mifidy ny mpitondra faratampony i Hong Kong, fantatra ho toy ny lehiben'ny mpanatanteraka, tsy amin'ny fifidianana faobe, fa amin'ny alalan'ireo 1.200 mpikambana ao amin'ny komity, izay amin'ny ampahany dia itambaran'ireo “zana-tsampana” samihafa izay misolo tena indostria maro karazany. Tao anaty filazana niraisana tamin'ny 29 Janoary, nitsikera ilay fanapahankevitra ho tsy rariny, tsy ara-dalàna, ary tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana avokoa ireo mpikambana avy amin'ireo zana-tsampan'ny sehatry ny lalàna.
Amin'ny fanilihana an-dRamatoa Chow Ting noho ny fandraisana anjarany amin'ny fikambanana iray miaro ireo hetsika politika sasantsasany izay heverin'ny governemanta ho tsy azo ekena, nampiasa ny hevitra politika na ny fiarahamiasa ho antony iray tsy anomezana azy ny zo hilatsaka ho fidiana ilay fanapahankevitra – izay tsy am-pisainana, tsy ara-dalàna ary tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana.
Namoaka fanambarana ihany koa ny mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny 29 Janoary, nanameloka ny governemanta ao Hong Kong ho manimba ny sata iraisam-pirenen'i Hong Kong ho toy ny fiarahamonina malalaka sy misokatra.
Na izany aza, niaro ny fanapahankevitry ny fitondrana i Carrie Lam, filoha mpanatanteraka, ka nanambara tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 30 Janoary hoe:
Raha toa ireo fotokevitra ara-politika sasany ka hita latsaka anatin'ny fanitsakitsahana ny Lalàna Fototra – miaraka amin'ny zavamisy mazava tsara – tsy mifanaraka amin'ilay fanahin'ny “Firenena iray, Rafitra Roa” – na, henjankenjana kokoa, miaro ny fahaleovantena na ny fizakantena ao Hong Kong, na mamela ny fahaleovantena na ny fizakantenan'ny faritra iray ho safidy – tsy manaja ny fepetra takian'ny lalàna noresahiko izany.
Manondro fametrahana araka ny lalàna izay isitrahan'i Hong Kong fahalalahana ara-toekarena sy fiainan-tsamirery ny “Firenena Iray, Rafitra Roa” , na dia ampahany amin'ny Shina aza izany.
Mitodika amin'ny kandidà hafa ankehitriny ny ankolafy mpanohana demaokrasia: Au Lok-hin, hanoloana an'i Agnes Chow ho an'ilay Nosy Distrika.
4 andro izayLaos
2 andro izayMediam-bahoaka